Izixhobo kunye neeNkqubo eziNdigcina kwiShishini | Martech Zone
Iinyanga ezintandathu zokugqibela bezinomceli mngeni njengoko ndiqale elam ishishini. Owona mceli mngeni kukuhamba kwemali… ukhawuleza ufumanise ukuba nangona usebenza nzima, imali ayithethi ukuba ingena emnyango. Ngenxa yoko, ndibaleka kwaye ndithetha kakubi. Andikayithengi indawo yeofisi okwangoku.
Ndacinga ukuba ndingabelana ngokwaphuka kwezixhobo zam zorhwebo. Andinanto ikhethekileyo kwaye ndisebenza ngokwenene ukugcina iindleko ziphantsi kangangoko kunokwenzeka.
IMacbookpro -Andinayo yakutshanje, kodwa oku ngokuqinisekileyo kuyinjini yomsebenzi wam. Ndinqwenela ukuba nemodeli entsha, kodwa ndibeka inkcitho okwethutyana. IMac yam ibaleka ngeNgwe ngokuqaqambileyo kodwa ibambe iliso lesibini elikhulu kwaye iza kumisa. Le iya kuba yinkcitho yam enkulu ngowama-2010 njengoko ndijonge ukuphucula.
Intambo eyongezelelweyo yeMacBookPro yam -Laptop nganye kufuneka ize neentambo ezi-2 ubuncinci… enye yokuhamba emsebenzini kwaye enye ukuyigcina engxoweni yakho! Ixesha!
I-Western Digital 250Gb USB Drayivu -Lolu lugcino lwam oluphambili lwedatha yabathengi, endikugcina kwakhona kwi-Intanethi. Ndingathanda ukufumana Ixesha leCapsule yeofisi yasekhaya.
IBlackberry 8330 - enkosi ku Adam Ukucebisa le fowuni. Isiqingatha sobuchopho bam sikule fowuni. Ivumelaniswe nayo Izinhlelo zeGoogle, Ikhamera, i-Evernote, i-Twitter, i-Facebook kunye ne-Foursquare ngoku kuyo.
Flip iMino HD -Ukufumana iiklip zevidiyo ngumceli mngeni kumfana obhala kakhulu, kodwa le yeyona khamera ye-HD iphambili kulo msebenzi! Idityaniswe ne iMovie kwaye ICamtasia yeMac Ukwenza iimovie akunakuba lula.
Imakrofoni yeBlue Snowflake -Ndirekhode iintetho ezimbalwa kunye nokurekhodwa kweaudio ngale mic kwaye kumnandi. Kubhetele kakhulu kunombhobho we-laptop ongagqibekanga!
I-Sony Earbuds - idityaniswe I-Pandora iwijethi yedesktop (inkonzo ehlawulelweyo), awungekhe uhambe gwenxa kwezi. Bacima yonke into.
UOgio ingxowa yekhuriya kwii-eBags. Le bhegi (imodeli yeHip Hop) ayikho into emfutshane eyoyikisayo… iinyanga ezintandathu zokurhuqwa, ukuphoswa, kunye nokubethwa ngendlela engummangaliso kwaye ikhangeleka intsha kraca. Ndinqwenela ukuba imitya yamagxa ibe nee-swivels, nangona.
iPod Touch -Ndisaza kudlala nazo zonke iiapps, bafo. Ndingayinika le yabantwana kwaye ndifumane imodeli entsha, nangona… ityala undixelela ukuba amatsha aneemakrofoni ezakhelwe ngaphakathi!
Iincwadi ezintsha -Izo zonke ii-invoices zam zabaxhasi zenzeka ngeencwadi ezintsha. Ngoku ndinabanye abahlobo aba-2 abayisebenzisayo… sisoftware engakholelekiyo njengesisombululo seNkonzo sokulawula abathengi bakho.
lwebhokisi Ukuza kuthi ga ngoku, le yeyona ndlela ibalaseleyo yokugcinwa kwe-intanethi kunye nolawulo lwefayile endikhe ndayisebenzisa. Idityaniswe ngokuthe ngqo zombini kunye ne-OSX kunye neWindows yokutsala kunye nokwehla kokulula. Ndineetoni zabahlobo abayisebenzisayo kwaye sithumela iifayile ezinkulu zabaxhasi ngapha nangapha ngokulula.
Usetyenziso lukaGoogle lwemeyile -Zonke ezinye ii -apps zilunge kakhulu xa kuthelekiswa neOfisi (uxolo kuGoogle), kodwa iiGoogle Apps zixabisa i $ 50 / yr pricetag nge-imeyile yeshishini. Isakhono sam sokuvumelanisa kunye nokulawula ii-imeyile ezininzi kunye nokusetyenziswa kwekhalenda kuyinto entle.
My Isicelo se- # 1 sika-2009 ngaphandle kwamathandabuzo, Ihlathi. Ndandihlangana nje nomntu ngenye imini owayethetha malunga nokuba bangaphi efowunini nakwi-imeyile bezama ukucwangcisa ixesha lokuqeshwa. I-Tungle yenza ukuba kube lula ngokulula. Ingqamana ngaphandle kwamandla neekhalenda zikaGoogle ngokunjalo-ke nangaliphi na ixesha xa ndinempazamo yokucwangcisa-ihlala ingakhange ndiyirekhode ngokufanelekileyo.
tags: usasazo losasazoIsixaisabeloamaqhosha okwabelanaumxholo okwabelwanayo
Ukusebenzisana kweKhowudi yeXesha langempela neQela
Jan 20, 2014 kwi-3: 13 AM